သင်၏ဖိုင်sharingအတွေ့ကြုံကို အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပါ။ - Zapya Blog
By dewmobile / 2022-03-18
ယခုခေတ်ခါမှာ အလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ဖိုင်များကို online sharing ပြုလုပ်ခြင်းကို အားလုံးနှင့် ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဖိုင်များကို တစ်နေရာတည်း sharing လုပ်ရန် မည့်သည့် ပလက်ဖောင်း သုံးရမလဲဟု တွေ‌‌‌‌ဝေနေပါသလား ?
www.zapyatransfer.com ဟူသော ဝပ်ဆိုဒ်မှာ အကောင်းဆုံး ဖိုင်sharing အတွေ့ကြုံကို ရယူခံစားလိုက်ပါ။ Zapya Transfer ဆိုသည်မှာ devicesအမျိုးမျိုးမှ (smartphones မှ tablets သို့မဟုတ် laptops သို့) ဖိုင်များကို မည်သည့် account မှဖွင့်ရန်မလိုပဲ လွှတ်လပ်စွာ sharing နိုင်သော ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်။ 1GB နှင့်အထက်သောဖိုင်များကို မည်သည့် account မှဖွင့်ရန်မလိုပဲ ပို့ဆောင်မျှဝေလို့ရပါသည်။ အသုံးပြုသူအတွက် ဖိုင်များကို ‌clickနှိပ် ရွေးချယ်ဤ ဆွဲချလိုက်ယုံဖြင့် အလွယ်တကူ ကူးယူမျှဝေနိုင်သော အင်တာဖေ့စ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Zapya Transfer ပလက်ဖောင်းသည် ခဏန်းခြောက်လုံးပါသော code ကိုပေးပို့ဤ ထိုcode နံပတ်နှင့် ခုနှစ်ရက်အတွင်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Zapya Transfer ဝပ်ဆိုဒ်မှာ အခမဲ့ account တစ်ခုကိုလျှောက်ထားဤ 2GB နှင့် အထက်သော ဖိုင်များကို ပို့နိုင်ခြင်းနှင့် အခြား features များဖြစ်သော (Share via email, Photo preview နှင့် Video preview) စသော ထပ်တိုး features များကို ခံစားခွင့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးပေါ် Pro ဗားရှင်း သည် ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးများကို ပိုမို sharing နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Pro accounts သည် 10GB ထိဖိုင်များကို sharing နိုင်၍ အကန့်သတ်မရှိ ဖိုင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ၊ ချုံ့ထားသောဖိုင်နှင့် အသံဖိုင် များကို ပြောင်းလဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်လစာအတွက် ‌ဒေါ်လာတစ်ကျပ် သို့မဟုတ် တစ်နှစ်စာအတွက် ‌ဒေါ်လာတစ်ဆယ်ဖြင့် ယနေ့ပဲ update လုပ်လိုက်ပါ။
Zapya Transfer သည် ဖိုင် sharing ပလက်ဖောင်းတစ်ခု တည်းမဟုတ်ပဲ ကိရိယာများကို စုဆောင်းထားသော ပလက်ဖောင်းတစ်ခုပြင်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် Zapya Transfer ၏အသုံးပြုသူ တစ်ဦးအဖြစ် လျှောက်ထားလိုက်ပါ။
Передевайте и конвертируйте файлы с Zapya Transfer
اشتراک گذاری و تبدیل فایلها
مشاركة وتحويل الملفات باستخدام Zapya Transfer
Upgrade Your File-Sharing Experience
اپنے فائل شیئرنگ کے تجربے کو مزید بہتر بنائیں۔
6 thoughts on “သင်၏ဖိုင်sharingအတွေ့ကြုံကို အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပါ။”
Anx Min says:
2022-03-20 at 12:04 pm
please, solve my problem and error.
2022-03-21 at 5:36 pm
Dear Anx Min,
May we ask, what kind of problem or error you’re having?
တမထ တမထ says:
2022-05-25 at 1:55 am
2022-05-29 at 12:44 pm
Hello, တမထ တမထ 😉
2022-05-19 at 1:20 pm
I can’t share video to my laptop and ph also .Only can share photo so what error have ?Plse solve my problem.
2022-05-20 at 1:34 pm
First, please try to update Zapya on your PC and your mobile device.
If you will still face this problem. Then please let us know what mobile device you are using? If it is Android, which version? We will try to solve your problem.